ऋषिपञ्चमी ‘स्वच्छताको पर्व’
ऋषि पञ्चमीलाई स्वस्थ्य हुने ज्ञान बाँढ्ने दिन बनाउने कि ‘पाप’लाई पखाल्ने दिन बनाउने !
भदौ ७, २०७७ कविता खड्का
हिन्दू संस्कार अनुसार महिलाहरूका लागि हरितालिका तीजसँग ऋषिपञ्चमीको महत्व जोडिएको छ । पौराणिक कथन अनुसार नारीहरू रजस्वला हुँदा जानेर वा नजानीकनै गरिएका जति पनि पापहरू छन् त्यसबाट मुक्ति पाउनका लागि ऋषिपञ्चमी व्रत गर्ने गरिन्छ ।
भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिनमा मनाइने ऋषि पञ्चमी आज नेपाली नारीहरूले सप्त ऋषिको पूजा आराधना गरी मनाउँदैछन् । महिलाले आज बिहानै उठेर नजिकको नदी, खोला, ताल, तलैया र पोखरीमा गई ३६५ दत्तिवनले दाँत माझ्ने, गाईको गोबर, माटो र खरानी लगाई स्नान गर्ने गर्दछन् ।
रजस्वलाका समयमा छाइछुइ लगायत कुनै त्रुटि भए आज ऋषि पञ्चमीको दिन अरुन्धती सहित सप्तऋषिको पूजा गर्नाले मुक्ति मिल्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ । कर्कलाको तरकारी बनाई एकछाक खाना खाने गर्दछन् । ऋषिहरूको पूजा गर्दा विवाहित महिलाहरूले अटल सौभाग्यका लागि सौभाग्यसूचक चुरा, धागो, सिन्दूर, पोते पनि चढाउँछन । सप्तऋषिहरू कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि र वशिष्ठ तथा पतिव्रता अरुन्धतीको पूजा गर्नाले महिलाको रजोदोष लगायत अन्य सबै दोष नाश भई यस लोकमा समृद्धि प्राप्त हुने र परलोकमा मुक्ति मिल्ने भविष्योत्तर नामक पुराणमा उल्लेख गरीएको छ ।
नारीलाई रजस्वलाको तीन दिनसम्म छुन नहुने तथा त्यस अवधिभर विभिन्न संज्ञा दिइने र चौथो दिन स्नान गरी शुद्ध हुन्छिन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । यसैकारण आजको दिन दत्तिउन, गाईको गोबर, माटो र खरानी प्रयोग गरी स्नान गरेर पञ्चगव्य सेवन गर्नाले छुवाछूतको दोष निवारण हुन्छ भन्ने शास्त्रीय वचन रहेको नेपाल ज्योतिष परिषदको प्रदेश नं २ को अध्यक्ष पं ज्योतिषी छबिरमण सुबेदीले बताए ।
महिलाको रजस्वलासित जोडिएको ऋषि पञ्चमीका विषयमा एउटा किम्बदन्ती पनि प्रचलित छ । प्राचीन समयमा इन्द्रले विश्वरुपको शिरलाई तीन टुक्रा पारी हत्या गरेका कारण ब्रह्म हत्याको पाप भोग्नुप¥यो । यस हत्याबाट पिरोलिएका इन्द्रले आफ्नो दुःख ब्रह्मालाई सुनाउनुभयो । इन्द्रको ब्रह्म हत्या निवारणका लागि ब्रह्माले एक वर्षसम्मको दोष इन्द्रलाई भोग गराइ बाँकी दोष पृथ्वी, वृक्ष, जल र स्त्रीमा चार भाग लगाई चारैतिर फ्याँकिदिए ।
यसैकारण उब्जनी नहुने उषरभूमि, वृक्षबाट निस्कने खोटो, पानीमा निस्कने बुदबुद फेन अर्थात् फिँज र स्त्रीमा रज देखिन थालेको धार्मिक विश्वास रहेको पण्डित ज्योतिषी छबिरमण सुबेदीले बताए ।
रजस्वला भएका बेलामा अरुलाई छोइछाइ गर्दा महिलाको शरीरबाट निस्कने विकृत रजका कीटाणुले नराम्रा रोग निम्त्याउने र त्यसले गर्दा महिलालाई नै पाप लाग्ने भएकाले छुन नहुने र जानी नजानी छोइएमा आजको दिनमा अरुन्धतीसहित सप्तऋषिको पूजा गर्नाले त्यस पापबाट मुक्त भइने धार्मिक विश्वास रही आएकाले यस पर्वलाई वैज्ञानिक मान्नुपर्ने ज्योतिषी छबिरमण सुबेदीले बताउँछन ।
बदलिदो समाज र यर्थात
हाम्रो धर्म ग्रन्थमा महिनावारीका बारेमा बार्नुपर्ने, महिनावारी भएकी महिलाले भिन्नै बस्नुपर्ने भनेर लेखिएको छ । यस्तो ग्रन्थ त्यो बेलामा लेखिएको थियो, जब विज्ञान थिएन । मानव शरीरको बारेमा ज्ञान थिएन । अनुसन्धान थिएन । अहिले त समय परिवर्तन भइसकेको छ । महिनावारी र शरीर विज्ञानका बारेमा आधुनिक ज्ञान अहिले स्कुलमा पनि पढाइन्छ । वेदमा लेखिएको महिनावारीसँग गाँसिएका ‘मिथक’हरुलाई पढ्दा अचम्म लाग्छ । ‘रजस्वला भएपछि अरुले नदेख्ने गरी लजाएर घरभित्र बस्नु पर्छ । एकसरो लुगा लगाएर कमजोर हुँदै दुःखी भएजस्तै स्नान र गहनाको श्रृंगार त्यागेर भुँईमा सुत्दै तीन दिन बिताउनुपर्छ र तीन रातपछि घाम झुल्कँदा लुगासहित स्नान गर्नुपर्छ । तर, यी कुरालाई अहिले मानिँदैन ।
त्यतिमात्र होइन, अहिलेको विज्ञानले त महिनावारी हुँदा सफा बसौंं, हाँसौं, स्वस्थ खाना खाउँ, सकिन्छ भने दिनदिनै नुहाएर लुगा फेरौं भन्छ ।अहिले पनि ‘वेदमा त्यस्तो लेखेको छ, त्यसैले महिलाहरु दुःखी भएर तीन दिन भूईंमा सुत्नुपर्छ’ भनेर त कोही पनि पण्डित, पुजारी, हजुरआमा, हजुरबाबाले भन्दैनन् । किनभने, नेपाली समाज नयाँ विचारलाई छिट्टै अंगीकार गरेर व्यवहारमा ल्याउने समाज हो ।
आज भन्दा ६० औ वर्षअघि रजस्वला हुदा नछुने, टालो भन्ने शब्द प्रयोग गर्न गाह्रो हुन्थ्यो । नछुने महिनावारी भएपछि पेट दुख्ने, वाकवाक लाग्ने जस्ता समस्यालाई झेलेर नै किशोरीहरु, महिलाहरु बस्थे । अहिले त नेपाली समाजमा महिनावारी कुनै लुकाउनुपर्ने छलफल गर्न नहुने, विषय होइन भनेर पढाइन्छ ।
महिनावारी भएका बेला ऋषिपञ्चमीलाई ‘महिनावारी दिवस’ मनाउन किन सकस मान्नु ? होइन, यसो गर्दा त ‘हाम्रो धर्म संस्कृति नै नष्ट हुन्छ’ भन्नेहरुले भन्न सक्छन् । ऋषिपञ्चमीको दिवस मनाऔं, प्लिज भनौं, अनि सहज हुन्छ धर्मका कुरा गर्नेलाई ऋषिपञ्चमी पाप पखाल्ने पर्व नमानेर ‘स्वच्छताको पर्व’ भनेर मनायो भने शायद संस्कृतिको रुपान्तरण सकारात्मक ढगंबाट हुन्थ्यो होला ।
ऋषिपञ्चमीका दिन किशोरीलाई महिनावारी हुँदा कसरी स्वच्छ रहने, महिनावारी हुँदा पर्ने साधारण समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारे छलफल चलाउन सकियो भने संस्कृतिले साँच्चै सकारात्मक सन्देश फैलाउनेछ । ऋषि पञ्चमीलाई स्वस्थ्य हुने ज्ञान बाँढ्ने दिन बनाउने कि ‘पाप’लाई पखाल्ने दिन बनाउने ?
#ऋषिपञ्चमी ‘स्वच्छताको पर्व’
आइतवार, भदौ ७, २०७७, ०७:०८:००
सुन तस्करको जंजाल तोडनमा प्रहरी लागेको छ : प्रहरी उपरिक्षक पन्त
मानिसमा तनाबसँगै मुटुरोग पनि बढ्दो छ : मुटु रोग बिशेषज्ञ डा. राधा भट्टराई (भिडियो सहित)
असार १६, २०७७ कविता खड्का
साहित्यकारको लागि साहित्य नै जीवन हो : कोषाध्यक्ष सरु शब्दमा समाज परिवर्तन गर्न सक्ने कला हुन्छ,
असार १५, २०७७ कविता खड्का